Ukuhlaziywa kweeNkwenkwezi zeNkwenkwezi ze-Star (X360)
Ukufakela iintaka ezinomsindo azizange zijabulise
Iimfazwe ezivuthiweyo Iinkwenkwezi zeenkwenkwezi ze-Xbox 360 zixutywe ngeeyure eziliqela zomxholo wokudlala, ukubonakaliswa okuhloniphekileyo, kunye nomdlalo oqinileyo owenene ngokwenene. Kuya kuhlawula ixabiso "lexabiso" le $ 39.99, eliyimpilisi enzima ukugwinya ngokuqwalasela into eninzi ifumaneka kwiqhekeza leendleko kwifowuni yakho yeselula. Kwabadlali abathile, ukubahluko olwahlukileyo kuninzi kakhulu ukunqoba. Kukho iinzuzo ekuthengeni i-console version kodwa, njengempumelelo, ukulawula okukhulu, nokukwazi ukudlala kwisikrini esihle esikhulu, nje ukubiza ezimbalwa. Abanye abantu abayithandi imidlalo yokudlala, nangona kunjalo, kwaye banako ukudlala into enjengeenkwenkwezi njenge-Angry Birds Star Wars kwi-console, nakwi-premium, ingafanelekile.
Ukuhlaziywa - Sekuyiminyaka emibini, ngoko ii-Angry Birds Iinkwenkwezi ze-Star zihlaziye zingcolile-ixabiso kufuneka libe liqala ngalo-elenza ukuba lufaneleke ngakumbi ukuqokelela.
I-Kinect Sensor Ukhetho
Umthuthukisi : Rovio
Ukulinganiswa kwe-ESRB : "E" kuwo wonke umntu
Uhlobo: I- Puzzle
Iinkonzo: Iitoni zomxholo; umlutha kunye nokuzonwabisa; umdlalo othabathayo kwi-"Star Wars"
Umxhasi: Ulawule ixesha; menus; xabiso; Ulawulo lweKinect
Iinqwelo ezivuthiweyo Iinkwenkwezi zeenkwenkwezi ziintaka kunye nama-piggies athatha i-classic "Star Wars". Abalinganiswa baphinde bacingwe njengeentaka kunye nehagu, kwaye konke kunobumnandi kwaye buqili ukuba kwenzeka njani konke. Yiyo kuphela i-classic trilogy kwaye ayinayo nayiphi na into ephambili yezinto eziphambili ezibandakanyiweyo neenkcukacha ze-Star Wars II ezikhutshwe kutshanje.
Kukho amaqela angaphezu kwekhulu ahlula phakathi kweTatooine, i-Star Star, i-Hoth (kunye nensimu ye-asteroid), kunye ne-Cloud City kunye namanqanaba aqukethe i-Boba Fett, ukuqeqeshwa kweJedi kunye ne-Yoda kwiDegoba, amanqanaba amancinane, kunye nokunye. Kukho iiyure ezininzi zokudlala umdlalo apha, kwaye kunokukunqanda kakhulu ukuba uzama ukufumana amanqaku aphezulu.
Iziseko ze-Angry Birds I-Star Wars gameplay ifana nale. Ngalinye nqanaba linemigodi yeengulube ezifuna ukubulawa, ngoko uqalise iintaka kuzo - ngokukrazula intonga yomnxeba wesobunxele kwi-angle efuna ukuyifaka kwi-slingshot, uze ucinezele "A" ukutshisa - nokuba bawabethe ngqo okanye benze izinto kwiimeko zendalo ziwase kwaye ziwacinezele. Inene loo nto ilula. Ubuncinane ekuqaleni. Njengoko udlala umdlalo, uvula abalinganiswa abatsha kunye namagunya anokukwenza ukuba usebenze ngokugqithiseleyo ekugqibeleni ezo ngulube ze-Imperial. ULuka unezibane ezikhanyayo. U-Obi Wan unokunyanzela izinto eziphambili. UHan une-blaster. ULeia unesibonda senetrakta ukukrazula izinto ngaphandle. Kwaye i-Chewbacca yinto enobungqina obukhulu obungakwazi ukutshitshisa izinto ezisemgangathweni. Njengoko udlala uzakuvula iinguqulelo eziphuculweyo zamagunya.
Okona kuncoko kumdlalo, nangona kunjalo, ukuba i-design design ihlala idibanisa i-mechanics entsha kunye neyokuthakazelisa. Izinga elibekwe kwindawo yangaphandle ziza kufuna ukuba usebenzise iintaka zakho ngeeplanethi ezinamaqondo ahlukeneyo, kunye nokufumana i-angle epheleleyo yokuhlaselwa kwakho apho ufuna ukuba ikhohlise kwaye inelisekile. Amanqanaba eSixeko saseMpu anemijikelezo yomoya ephosa iintaka zakho (kunye naluphi na udoti owenzayo) malunga neepateni ezinokuqikelela ongazisebenzisa ukuze kubangele intshabalalo. Umgangatho wendlela yokucwangcisa ngokubanzi ufumana ngaphezulu kunye nobunzima kunye neengulube ezininzi ukubetha, izithintelo ezingakumbi zokuhamba, kunye nezindlela ezithakazelisayo zokusebenzisa i-physics enkulu ukudala i-mayhem efanelekileyo ngokufanelekileyo.
Ingcamango kukuba ngalinye inqanaba linendlela eyodwa "yokunene" yokuyibetha, apho ungagqiba zonke ihagu ngeentaka enye kuphela, kodwa kungekhona "iindlela ezingalunganga" zokwenza izinto. Unokufuneka usebenzise zonke iintaka onokuzilahla (ngokuqhelekileyo 3 kodwa ngamanye amaxesha ngaphezulu) ukuwugqiba, kodwa nje kuphela xa ihagu zifile akukhathaleki. Ngaphandle, oko kukuthi, ufuna ukuzama ukufumana amanqaku aphezulu kwaye ufumane iinkwenkwezi ezintathu kwiinqanaba ngalinye. Emva koko umdlalo uba ngumlutha kakhulu kwaye ujabule njengoko uzama ukufumana indlela engcono yokubetha ngalinye iqanaba. Ndikholelwe, uya kufumana, kwaye ekubeni unokuqalisa ngokukhawuleza kwinqanaba nje ngokubamba iqhosha elithi "X", ungazama kwaye uphumele kwaye uqale ngokukhawuleza ngokukhawuleza.
Ndinezinto ezimbalwa zeemidlalo kunye nomdlalo kwiinduduzo, nangona kunjalo. Okokuqala, izihlandlo zomthwalo zibonakala zifana nokugqithiseleyo ngendlela elincinci kwaye lilula ngayo amanqanaba. Ngenhlanhla, njengoko ndikhankanywe ngentla, xa inqanaba lilayishiwe ungayilungisa ngokukhawuleza ngaphandle kwemizila, elinceda kakhulu. Enye ingxaki endikuyo kukuba amamenyu akhathazekile kakhulu. Ngokuqhelekileyo imifanekiso nje engekho icatshulwa ukuchaza oko benzayo ngokwenene, ngoko xa uqala ukudlala uya kugubha kwiimenyu ezingayazi kakuhle oko kuthini.
Umdlalo unakho ulawulo lweConect olukhethiweyo, kodwa alufanelekanga ukusetyenziswa. Awusebenzi ngokuchanekileyo njengoko usebenzisa umlawuli oqhelekileyo, unqande kakhulu ukulawula ikhamera (okwenza amanqanaba emva kamva kunzima), kwaye banamathele ekunciphiseni ukuhamba komdlalo kakhulu. Ingongoma elapha apha ikwazi ukukhawuleza ngokukhawuleza kwaye iqalise kwakhona inqanaba ngokuphindaphindiweyo, kwaye ukwenza njalo intlungu kunye neKinect.
Imizobo & amp; Isandi
Imbonakalo ilungile kuphela, kodwa ayifanele ibe yinto emangalisayo. Unokubona lula yonke into oyifunayo ukuyibona, ngoko akukho zikhalazo apha. Isandi sisilungileyo, kuba konke kuthathwa kwiifilimu ze "Star Wars", kunye nomculo ulungile nangona kunjalo ikakhulukazi imixholo "esondele" kwiingqungquthela ezivela kumabhayisikobho, kodwa ayifani. Ku sava kakuhle.
Konke kuzo zonke, iinqwelo ze-Angry Birds i-Star Wars ngumdlalo ocolileyo ngokwenene. Ukuba ngaba iinguqulelo ezinqabileyo ezinqabileyo zangekho, ndingazicebisa ngokukhawuleza kwaneti epheleleyo yexabiso le-$ 40. Kodwa ezo iinguqulelo zesebe zikhona, ezenza intlawulo epheleleyo kwi-Xbox 360 ngokukhawuleza. Ngaloo nto uthe, mhlawumbi awuyithandi imidlalo yokudlala. Mhlawumbi ufuna ukudlala kwisikrini esihle esikhulu esinokulawula. Mhlawumbi ufuna ukudlala umdlalo omnandi kunye neentsapho zakho. Ukuba nayiphi na yezi ziganeko zisebenza kuwe, kukho umxholo okwaneleyo apha ukuba andicinga ukuba uya kucinga ukuhlawula i-MSRP epheleleyo yeeNtshonkqo zeNkwenkwezi zeNkwenkwezi zeNkanyezi kuba kuya kuba yinto oyifunayo. Kwaye, ewe, ngokusweleka komncintiswano (i-LEGO Star Wars, Force Unleashed ) yinto yeyona nto yeyona midlalo ye-Star Wars imidlalo kwi-Xbox 360, ngoko kuya kuhamba nayo. Umdlalo uya kufumaneka kwiXbox One .
Ukuchazwa: Ikopi yokuhlaziywa yanikwa umvakalisi. Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, nceda khangela iMgaqo-nkqubo Wezolawulo.
Ubomi bunzima: I-Ep1: I-Chrysalis Review (XONE)
I-Guitar Hero: I-Metallica epheleleyo Ingoma yeeNgoma
I-PDP iMortal Kombat X Ukuhlaziya iPad Pad (XONE, X360)
I-Best 10 ye-Xbox 360 RPGs ongayithenga
Yintoni i-Xbox 360 Core System?
Ixabiso leXbox Live Cost?
I-Fables Cheats & Glitches - I-Xbox Cheats kunye neZintshi ze-Fable
I-Microsoft Izisa i-Xbox One Dev Kit Programme
I-Web Safe Safe Font
I-Atlona AT-AiR3 1080P PC ukujonga / i-HDTV i-Adapter engenazintambo
Ukulawula Abasebenzisi abaninzi kwiGoogle Chrome (Windows)
6 Iimveliso ezandisa iNtambo engenazintambo
Esi siKhokelo sokuHlola se-ESRB sichaza ukuba imilinganiselo yemidlalo nganye yomdlalo weMdlalo
All About Snapchat: Imizila Eyaziwayo Ngamanje
I-Cisco Systems Networking Tutorials kunye neZibonelelo
Indlela yokudlala imidlalo kwiXbox One
Inkcazo yeTrm Design Power TDP
Indlela yokuprinta iifayile ngokukhawuleza ukhupha ikhamera
I-Windows 10 Game Bar
IWarhammer 40,000: Ukuhlaselwa kweeNkohlakalo zeMpi
Ingaba Ifowuni Yakho Inayo Voicemail Ebonakalayo?
Phinda ubuye kwi-Computer Networking
I-Apple Swift Playgrounds iya kunceda abantwana bafunde ukuCwangcisa
Ziziphi iibhodi zeendaba ze-Animation?
I-20 ye-Memes Best Memes
I-Shop kufuphi ne-TheFind App Review
I-CES 2016 Ingxelo yokuNgqwaba
Izinto ezintlanu ii-Sony Fans kufuneka zikulindele kwi-E3 2015
5 Usetyenziso olufanelekileyo lwe-Apple Watch Security
Indlela Ukuxhumeka Koxhumano Lwenethiwekhi Lwenu Lungahamba Ngayo